Mmanụ lemongrass adịghị mma maka nwamba? | AromaEasy N'ogbe Mkpa Ejiri Mkpa
Mmanụ lemongrass adịghị mma maka nwamba?
Ihe na February 13, 2020 February 13, 2020 by Aromaeasy
Isiokwu a bụ ezigbo nkọwa maka ndị nwe pusi ichepụta etu esi ejide nchekwa nke anu ulo ha n'ihi na mmanụ ndị dị mkpa abụrụla nnukwu uru dị n'ụlọ anyị. Eleghị anya ị jirila mmanụ dị mkpa n'ọtụtụ ụzọ na ndụ kwa ụbọchị, gụnyere ọgwụgwọ ọgwụ, ọgwụ na-agwọ ọrịa, ngwaahịa nlekọta ahụ, na ngwaahịa nhicha ụlọ.
N'ihi ya, ọ bụrụ na ị bụ nne na nna pusi, ịmara ihe ndị bụ isi banyere ihe mmanụ mmanụ dị oke egwu nwere ike ịba.
Gịnị bụ mmanụ lemongrass
lemongrass bụ ahịhịa nwere isi citrus nke yiri nnọọ isi ísì lemons. Ogwu ya na nri ndi mmadu mara nke oma n’uwa niile.
Ewepụtara site na akwụkwọ ya na ahịhịa nke osisi lemongrass, mmanụ lemongrass dị mkpa nwere isi citrus pụrụ iche.
A kwenyere na mmanụ dị mma nke lemongrass mmanụ dị mkpa nwere antifungal, antibacterial, insecticidal and anti-inflammatory Njirimara.
N'ihi ya, ha bụ ọgwụ ọgwụgwọ ebumpụta ụwa maka mgbu mgbu, na-eme ya mmanụ ịhịa aka n'ahụ.
Ọ ghọwokwa ihe a na-ahụ anya dị ka ọgwụgwọ homeopathic maka nsogbu ihi ụra na nsogbu nri.
Mmanụ lemongrass adịghị mma maka nwamba
Agbanyeghị, azịza ya bụ “ee” na “Ee e”.
N'otu aka ahụ
Nwamba dị iche na ụmụ mmadụ, yabụ ihe dị mma maka gị nwere ike imetụta pusi gị n'ụzọ dịtụ iche.
Nke mbu, anyi agha ikwu na mmanu di nkpa kwesiri karie nchekwa nwamba karia ndi n’enwe ikuku na mmanu otite. N'agbanyeghị nke ahụ, nwamba nke isi gị nwere isi ahụkebe. Nwamba nwere mmetụta siri ike karịa mmadụ, imi ya na-emetụtakwa mmetụta karịa nke anyị. Yabụ na ọ ga - ekwe omume na isi ị ga - ahụta na ihe na - atọ ụtọ, nwere ike sie ike ma sie ike maka nwamba gị.
Nwamba ezughi oke na enzyme nke bụ maka ịkwatu phenol. Mgbe ejiri ya na njehie ma ọ bụ doụbiga ya ókè, mmanụ ọ bụla dị mkpa nwere ike ibute ọrịa.
N'ihi ya, itinye oke mmanụ aka na nwamba dị ize ndụ nye ha.
Maka nne na nna anụ ahụ na-achọ mmanụ ga-achọ iji mmanụ dị mkpa na anụ ụlọ, a na-ekwu na hydrosols bụ nnukwu nhọrọ n'ihe banyere nchekwa. A na-ahụkarị mmanụ Lemongrass n'ụdị hydrosol, isi ísì na-adịghị egbu egbu nke ihe ọkụkụ na-agbanye ma ọ bụ ihe ọkụkụ nke na-egbochi mmiri. Lemongrass adịghị mma iji nwamba gburugburu mgbe ọ nwere ntakịrị ịta. Ọ naghị atụ aro ka onye nwamba rie ya ma ọ bụ tinye ya na anụ ahụ ya.
Lemongrass mmanụ dị mkpa maka nwamba, mana ekwesịrị ịgbanye ya ma ọ bụ gbasaa. N'ihi ya anyị na-atụ aro iji ha na-agafeghị oke iji dobe gburugburu ebe obibi maka nchebe maka anụ ụlọ gị.
Kedu ka ndi nne na nna pusi kwesiri iji mmanu di nkpa
Ọ bụrụ na ị bụ onye nwe nwamba ma ịchọrọ iji mmanụ dị mkpa, enwere ọtụtụ ntụziaka ị ga-eburu n'uche iji hụ na nchekwa nke anụ ụlọ gị.
Itughari mmanụ gị dị mkpa
Ọbụna mmanụ eke dị ọcha na 100% dị mkpa dị mkpa ka etinyere ya tupu iji ya na mkpụrụ osisi.
Nwere ike iji mmanu akwukwo nri ma obu mmanu ndi ozo mee ka itughari mmanu gi. Gbaa mbọ hụ na mmanụ gị dị mkpa bụ ọkwa ịgwọ ọrịa. Mee mmanu mmanu gi di nkpa na 40: 1. Ọ pụtara na ọ dị gị mkpa ịgwagbu otu mịrị mmanụ gị dị mkpa ruo pasent 40 nke mmanụ ụgbọelu. Jiri naanị otu ntụtụ mmanụ a gwakọtara tinye ya na nwamba gị site na ntị ruo na ọdụ.
Jiri diffuser - ụzọ kachasị arụ ọrụ
Mostzọ kachasị eji enweta abamuru nke aromatherapy na nwamba, bụ site na ịgabiga mmanụ dị mkpa site na onye na-enye nsogbu. Ka oge na-aga, ka ụmụ mmadụ na-anụ ụtọ nsonaazụ bara uru nke mmanụ na-eme ka ahụike dị mma, ndị mmadụ malitekwara iji ha na anụmanụ iji hụ ma ha na-ebutekwa ọmarịcha anụ ụlọ. Iji mmanụ dị mkpa site na onye na-enye ya nsogbu abụwo otu ụzọ dị irè isi mee ya.
Jiri nlezianya malite na ndị hụrụ gị n'anya
Jiri nwayọ ma kpachara anya. Na mbido, anyị ga-akwado gị ka ị gbakwunye 3-5 tụlee nke lemongrass mmanụ dị mkpa na ihe nkesa juputara na mmiri (kwesịrị ịdị ọkara ma ọ bụ karịa), wee gbasaa ya.
Anụmanụ ọ bụla pụrụ iche. Leru anya nwamba gị anya mgbe ị na-ewebata ha mmanụ dị mkpa. Mepee anya maka mgbanwe omume ma ọ bụ okwu ndị ọzọ.
Iji mmanu ogwu di nkpa na nkpa bu ihe di nkpa. Dịka ọtụtụ nsogbu ga-ebilite mgbe ịzụrụ ngwaahịa dị oke ọnụ ma dị ala ma jiri ya na pusi gị.
Etinyekwala mmanụ na-enweghị mmanụ n'akụkụ ọ bụla nke ahụ pusi
Fọd nwere omume na-enye onwe ha nsogbu maka ịdị ọcha. Ọ bụrụgodi na i tinyere mmanu ọdụ ọdụ, ọ ga-arara mmanụ dị na ọdụ ya.
Mmanụ ndị dị mkpa na-aba uru karịa mgbe etinyere ya na anụ ahụ (nke gị ma ọ bụ nke pusi gị). Mmanụ mmanụ ndị dị mkpa n'ime ụlọ ga-adịrị gị mma karịa nwamba gị karịa ịnwa iji cat gị agwọ ya site na itinye ha n'ahụ ya.
Zere anya, imi, ọnụ, na paws. Gbalịsie ike izere ihe ndị ahụ nwere nsogbu na nwamba ụlọ gị ọbụna tere mmanụ mmanụ dị mkpa.
adịghị pia cat gị mgbe itinyechara mmanu di nkpa.
Kpachara anya mgbe ị na-eji mmanụ dị mkpa na ahụ gị site na ngwaahịa nke ngwaahịa nlekọta, ude ma ọ bụ ude; Ebe ọ bụ na nwamba gị nwere ike ịnwe gị na anụ ahụ ma nwee ike ịrara mmanụ nke dị n'ahụ gị (n'ezie ọ na-eme!). Must ga-akacha aka gi tupu i kpoo ya.
Ejila mmanụ osisi tii. Ọ bụ egwu nwamba.
Mee ka nwamba gị pụọ na mmanụ dị egwu (dịka oregano, osisi tii ma ọ bụ thyme).
Mmanụ dị mkpa nke nwere ike ịme ihe ọma maka Nwamba
Ọ bụghị mmanụ niile dị mkpa dị njọ maka nwamba.
Nwamba nwere ike ịnabata ụfọdụ ụdị mmanụ dị mkpa. Na ndị ahụ nwere ike inyere nwamba ọgụ ọgụ nsogbu ahụike. Na nke ọma, sayensi ewepụtala nnyocha banyere uru ọghọm dị mkpa dị na nwamba anyị ma ọ bụrụ na ejiri ya nke ọma.
Ka anyị lelee ndepụta mmanụ mmanụ dị mkpa maka nwamba:
Mmanụ lemon: Njirimara nke nje na ogwu
Enwere ike iji mmanụ lemograss gburugburu nwamba Ọ bụrụ na etinye ya n'ọtụtụ dị ala. Mainzọ isi nke dilution bụ iji ha na hydrosols site na diffuser. Zere itinye mmanụ lemongrass na-enweghị nsogbu.
Otu a na-aga maka mmanụ basil dị ụtọ nke enweghị nchebe iji dị ka fresheners ikuku gburugburu nwamba.
Dị ka lemongrass, mmanụ Helichrysum nwere ihe ndị nwere ike ịba uru na ọgwụ nje.
Mmanụ nke Cedarwood: Akpali mgbasa, na-akwalite sistemu na-alụso ọrịa ọgụ, na-enyere aka ịchụ efe
Cedarwood bụ mmanụ dị mkpa maka nwamba, ọ bụ n'ihi na a na-eme cedarwood na-enweghị phenol. Agbanyeghị, ịkwesịrị ugboro ugboro abụọ nke akara ahụ maka ọdịnaya tupu ijiri ya.
Chamomile: Na-eme ka afọ ju iwe, Na-akwado ahụ ike
You nwekwara ike iji Chamomile maka enyemaka mgbochi mkpali.
Mmanụ Frankincense: Nwere ike inye aka maka nsogbu nri cat.
Na antiseptik na ọgwụ mgbochi mkpali, ọ nwekwara ike inye aka dozie nsogbu mgbaze cat.
Jasmin mmanụ: Mbelata nrụgide na ịda mba.
Ọnọdụ obi mgbawa bụ ihe a na-ahụkarị na ụdị feline, ọkachasị mgbe ị kwagara ebe ọhụrụ. Jasmine nwere ike gbanwee homonụ nke cat gị ka ọ dabazie ma nweekwa ike ịgbanwe ọnọdụ ya.
Yiri jasmine, yarrow mmanụ dị mkpa nwere ike inyere pusi gị onye na-eme ihere aka inwe obi ike.
Mmanụ RosemaryA na - efe efe na - efe efe ma ọ bụrụ na etisasịkwara ya nke ọma.
Nke a abụghị ndepụta zuru oke
Mmanụ ndị dị mkpa maka nwamba
Enwere eziokwu a na-apụghị ịgbagha agbagha na mmanụ ụfọdụ na-emetụta nwamba nwere ihe ịrịba ama nke egbu egbu.
Ihe kachasị mkpa ịmara, bụ na mmanụ ndị dị mkpa na-etinye ike nke ukwuu. Na ụfọdụ nwere phenol na ihe ndị ọzọ phenolic na-ahụ anya na-egbu egbu maka nwamba. Ọ bụrụ na nwamba gị nwere ihe ndị a, eriri afọ ha na imeju ha enweghị enzymes dị mkpa ha nwere ike iwepụ, ịmịcha ma ọ bụ gwuo ala. Ma I nwere ike ịgba ọsọ maka vet oge niile.
Ọ bụ ezie na mmanụ ndị dị mkpa ndị a dị mkpa nwere nchebe karịa maka nwamba karịa fresheners ikuku na mmanụ na-esi ísì ụtọ. A na-ejikwa ha maka izu ike ma ọ bụ nzube ndị ọzọ nke ụmụ mmadụ, ị ka kwesịrị ịhapụ ha ma ọ bụrụ na ịnwere ezigbo ndị enyi n'okpuru ụlọ gị:
Mmanụ Citrus (wayo, lemon, mkpụrụ vaịn, wdg)
Mmanụ ọkụ wintergreen
Mmanụ ọma birch
Mmanụ tii (dị oke egwu)
Nke a abụghị ndepụta zuru oke ， ma.
Ngosiputa ilu nke mmanu di nkpa
Mgbe ị na-agụ ebe a, ị nwere ike iwulite ajụjụ dịka: Kedu akara ndị ga-egosi na mmanụ ndị dị mkpa emerụla m nwamba?
Ọ bụ ezie na mgbaàmà ndị ahụ nwere ike ịdị iche na ụdị mmanụ dị mkpa. Kaosinadị, n’ozuzu ha na ichikota, akara ndi a gụnyere:
Ihe mgbu na mgbu n'oge iku ume
Ughkwara ụsụ, iku ume, iku ume ngwa ngwa, yana iku ume
Ibelata ma obu igbatu ya
Na-ama jijiji na ịma jijiji, ma ọ bụ ịma jijiji
Okpomoku di obere
Nausea ma ọ bụ vomiting
Enweghi ike ije ije ma obu ataxia
Tupu iwebata nri ọhụrụ, ọgwụgwọ ma ọ bụ ihe dị n’ime anụ ụlọ, ndị nwere anụ ụlọ kwesịrị ịgakwuru onye na-ahụ maka anụ ụlọ. Mgbe ị na-eji mmanụ dị mkpa maka nwamba ma ọ bụ na-agbakwunye ya na gburugburu anụ ụlọ gị, dobe anya gị maka omume pụrụ iche. Inwere ike ịchọpụta ncha ọbara n’ahụ pusi gị mgbe i jiri mmanu dị mkpa. Ọ bụrụ n’ịchọpụta mgbaama ọ bụla edepụtara n’elu, kpọtụrụ vetiranter gị ozugbo. N'ozuzu, ha bụ ihe ngosipụta nke nsị mmanụ dị mkpa.
Ntụziaka ndị ọzọ
Chekwa mmanụ dị mkpa nke ọma, gbaa mbọ hụ na ha enweghị ike iru. Dịka nwamba nwere ihe mkpuchi anwansi maka ịbanye na ihe ha na-ekwesịghị. Ọzọkwa, ọtụtụ nwamba enweghị ike igbochi ahịhịa na-enweghị mmiri ma na-edebe ha ma ọ bụrụ na ha nwere.
Banyere Kittens, nwamba agadi, ma ọ bụ nwamba nwere nsogbu imeju ma ọ bụ akụkụ iku ume, ịkwesịrị idobe ya n'ụlọ ọ bụla ebe eji mmanye mmanụ dị mkpa.
Mmanụ ndị dị mkpa na-ebute mmetụta dị iche iche na anụ ụlọ anyị. Agbanyeghị, ntụpọ izugbe bụ na, ọ bụrụhaala na-echekwa mmanụ ndị a n'ọtụtụ ebe, oke nwamba gị enweghị nsogbu ọ bụla. N'ihi ya, jide n'aka na ị na-eji mmanụ dị mkpa eme ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Ọzọkwa, ịkwesịrị ijide n'aka na ị na-echekwa mmanụ ndị dị mkpa nke ọma na nke cat gị enweghị ike ịbịaru ya. Ọ bụrụ na anụ ụlọ anụ ụlọ gị nwere nsogbu ahụike yana ị ga-eji mmanụ dị mkpa, ọ dị mkpa ka i buru ụzọ nyochaa onye na-ahụ maka anụ ụlọ. Ha nwere ike ịmara nke ọma ma nwee ike inyekwu ndụmọdụ bara uru.
Plọgị ike & mpụga Odị O
Mkpa mmanụ vs.